ABO: Balaa Koroonaa Vaayiresii Xiqqeessuuf Gahee Keenya Haa Bahannu ! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooABO: Balaa Koroonaa Vaayiresii Xiqqeessuuf Gahee Keenya Haa Bahannu !
(Ibsa ABO Bitootessa 23, 2020)
Tatamsainni dhibee Vaayiresii Koroonaa Addunyaa irratti yaaddoo olaanaa uumee jira. Magaalaa guddittii fi handhuurti biyya teenyaa Finfinneen iddoo lakkoofsaa fi sosochiin namootaa itti guddatuu fi tajaajila geejjiba qilleensaatiin biyyoota Addunyaa hedduu wal qunnamsiistu dha. Kana irraa kan ka’es carraan tatamsa’ina dhibee kanaa Godinootaa fi naannoolee biyyattii kan biroo caalaa Finfinneetti akka hammaatu beekamaa dha.
Waan taheef, Addi Bilisummaa Oromoo Waajjirri isaa Muummichi magaalaa Finfinnee (Gullallee)tti argamu yeroo muraasaaf (hanga haalli tatamsaina dhibee kanaa caalaatti ifa tahutti) dhimmoota hojii akkaan fardii fi murteessoo tahaniif tajaajila kennuu irraa kan hafe cufaa tahuu beeksisa. Sochii Waajjiroota Dhaabaa kan sadarkaa Godinaa daangessuu ilaalchisee haaluma tatamsaina dhibee kanaa hordofuudhaan tarkaanfiin feesisu kan fudhatamu tahuu beeksisna.
Kanuma waliin haala yeroo kana keessatti akkaataa jireenyaa, qunnamtii fi sochii hojii miseensotaa fi caasaalee Dhaabaa irratti jijjiiramaa fi qindoominni addaa jiraachuu malu sirna caasaa keessaan kan wal beeksifamaa deemu tahuu hubachiisna.
Dhaamsa Ummataaf: Dhimma kanaan wal qabsiisuudhaan Ummatni hundi walitti dhufeenya/qunnamtii hawaasaa kan qaamaan wal bira gahuu gaafatan kanneen akka: Cidha, Walgahii, Barcaa, Mannneen nyaataa-dhugaatii, Internet Café, Sochiilee Spoortii fi taphoota adda addaa (Games), Lafoota bashannanaa adda addaa, Dhimma bahiinsa geejjiba waloo (Taxi, Buses), Iddoo bittaa-gurgurtaa, Manneen yaalaa (Hospitals), Buufata Poolisii fi Waajjiroota hojii adda addaa, Manneen hidhaa, Bakka duaa fi iddoo awwaalchaa … fi kkf. keessatti haala dandaame hundaan of eeggannoo gochuu fi of daangessuudhaan tatamsaina dhibee hamaa kanaa tohachuuf namuu gahee isaa akka bahatu Addi Bilisummaa Oromoo yaadachiisa.
Kanatti dabalee araadni akka tamboo (cigarette) balaa kana hammeessuu keessatti qooda guddaa qabaachuun waan hubatameef hawaasni akka irraa of daangessuu fi walumaagalatti dhimma kana ilaalchisuudhaan qajeelfamoota maddeen amanamoo irraa karaa mootummaa fi Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Ummataaf tamsaan xiyyeeffannoodhaan hordofuu fi dhimma itti bahuunis aadeffatamuu akka qabu hubachiisna.
Dhaamsa Mootummaaf: Yeroo ammaa balaa guddaa Vaayiresiin Koroonaa dhaqqabsiisuu dandau irraa lubbuu dhala namaa baraaruudhaaf jecha Biyyootni/Mootummootni Addunyaa gariin hidhamtoota manneen hidhaa keessaa gadi lakkisuu dabalatee murtiilee jajjaboo ittisaa fi tohannoo dhibee kanaatiif gargaaran fudhachaa jiru.
Ummatni waa’ee vaayiresii balaafamaa kanaa yeroodhaan odeeffannoo gahaa argatee akka of baraaruufis tajaajilli qunnamtii akka irraa hin citneef maloota qunnamtii shaffisoo fi amansiisoo tahan caalaatti babalisuuf tarkaanfii fudhachaa jiru. Dhaabbattootni dhuunfaa tajaajila internet kennanis hanga dhibeen Koroonaa kun tohannoo jala oolutti sababa kamiinuu tajaajilli internet akka Ummata irraa hin citneef tarkaanfiilee gara garaa fudhachaa jiru.
Kana malees Finfinnee fi naannawa isii dabalatee Godinoota Oromiyaa hedduu keessatti namootni sababa gahaa fi murtii seeraa malee hidhaatti guuramanii jiran kumootaan lakkaawamu. Kana irrattis tatamsaina dhibee kanaatiin wal qabsiisee mootummaan tarkaanfii lubbuu baraaruu mulataa tahe fudhachuun kan isa irraa eegamu tahuu yaadachiisna.
Yoo kuni tahuu baatee qunnamtiin Ummata irraa muramee fi hidhaan seeraan alaas akkuma turee fi jirutti kan itti fufu tahe gochaan kun gaabbisiisaa fi seenaa fi seeraanis gaafachiisaa tahuuf akka jiraatu hubachiisna.
KMN: Namoonni yaada yeroo waliin hin deemne odeessan yeroon hojii isaanirraa ari’ataman amma ta’uu qaba